Izvo Zvimiro Zvese Zvemukati Management Sisitimu Inofanirwa Kuve Newe Nekutsvaga Injini Kugonesa | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 6, 2020 Chishanu, Mbudzi 6, 2020 Douglas Karr
Ndakasangana nemutengi anga achinetsekana nenhamba dzekutsvaga kwavo. Sezvandakaongorora yavo Content Management System (CMS), ndakatsvaga dzimwe tsika dzakanakisa dzandisina kuwana. Ndisati ndapa yekutarisa kuti ndiongorore pamwe neyako CMS mupi, ini ndinofanira kutanga ndataura kuti hapana zvachose chikonzero chekambani KUTI isave neyemukati manejimendi system.
Iyo CMS inokupa iwe kana yako timu yekutengesa kuti uchinje saiti yako pane nhunzi pasina kudiwa kwewebhu webhu. Chimwe chikonzero nei a Content Management System chakakosha ndechekuti vazhinji vacho vanoshandisa nzira dzakanakisa dzekugadzirisa yako saiti.
Iyo SEO purists inogona kupokana nezvimwe zvezvinhu zvandinokurukura pano nekuti zvinogona kunge zvisina kunangana nekumisikidzwa. Ini ndaigona kupokana nechero Injini Yekutsvaga Guru, zvakadaro, iyo yekutsvaga injini chinzvimbo chiri pamusoro pechiitiko chevashandisi - kwete yekutsvaga injini algorithms Izvo zvirinani iwe kugadzira yako saiti, investa mune zvakakura zvemukati, kusimudzira izvo zvemukati, uye kusangana nevashandisi vako ... zvirinani yako saiti ichaita mune ye organic yekutsvaga masosi.
Iwo makanika we inotsvaga sei inotsvaga inotsvaga, indekisi, uye chinzvimboyako saiti yako haina kuchinja zvakanyanya pamusoro pemakore… asi kugona kukwezva vashanyi, ita kuti vashanyi vagovane zvako zvemukati, uye kuti injini dzekutsvaga dzipindure zvashanduka. Zvakanaka SEO ndizvo ruzivo rwakakura rwemushandisi… Uye zvemukati manejimendi sisitimu yakakosha pakubudirira kwako.
Zvemukati Management SEO Zvimiro
ose Content Management System inofanira kunge iine kana kuiswa pamwe neanotevera maficha:
Zvokuchengetedza: Backups uye SEO? Zvakanaka… kana iwe ukarasikirwa nesaiti yako nezviri mukati, zvakawoma kuoma kuisa chinzvimbo. Kuve nekuchengetedza kwakasimba pamwe nekuwedzera mabhakitepisi pamwe neapo-kudiwa, off-saiti mabhakiti uye kudzoreredza zvinonyanya kubatsira.
Chingwa: Kana iwe uine ruzivo rwakawanda rwakarongeka zvine hungwaru, kugona kwevashandisi (uye mainjini ekutsvaga) kuti vanzwisise kuti hutongi hwakakosha pakuona kwavo zvemukati uye nekuzvinongedza nenzira kwayo.
Browser Notifications: Chrome neSafari izvozvi zvinopa kuzivisa kwakabatana nemahurongwa ekushanda Kana mumwe munhu akamira pane yako saiti, ivo vanobvunzwa kana vangade kuziviswa kana zvinyorwa zvikagadziriswa. Notifications chengetedza vashanyi kudzoka!
Caching: Nguva imwe neimwe peji painokumbirwa, dhatabhesi rinotarisa zvirimo uye rinobatanidza peji racho. Izvi zvinotora zviwanikwa uye nguva… nguva inokuvadza yako yekutsvaga injini optimization. Kuwana CMS kana kuitisa necaching kugona ndiko kiyi yekumhanyisa saiti yako uye kudzikisa zviwanikwa zvinodikanwa kuseva yako. Caching inogona zvakare kukubatsira iwe kana iwe ukawana kurwiswa kwetraffic… mapeji akachengetwa ari nyore kupa kupfuura asina kuvharwa mapeji. Saka iwe unogona kuwana akawanda akawanda vashanyi kupfuura iwe aunogona pasina caching.
MaCanonical URLs: Dzimwe nguva masaiti anodhindwa aine peji rimwe rine nzira dzakawanda. Muenzaniso wakapusa dura rako rinogona kunge riine http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Idzi nzira mbiri dzinoenda kune iro peji peji dzinogona kupatsanura huremu hweanouya mahukama uko peji rako risina kuverengerwa pamwe nezvarinogona kuve. A canonical URL chidimbu chakavanzika cheHTML kodhi inotaurira injini dzekutsvaga iyo URL iyo yavanofanirwa kunge vachishandisa iyi link.
Comments: Makomendi anowedzera kukosha kune zvako zvemukati. Ingova nechokwadi chekuti unogona kuenzanisa zvirevo sezvo paine toni yemabhoti kunze uko inosemesa mapuratifomu eCMS kuyedza kugadzira zvinongedzo.
Zvemukati Mhariri: Yemukati mhariri inobvumira H1, H2, H3, yakasimba uye italics kuputirwa kutenderera zvinyorwa. Kugadziriswa kwemifananidzo kunofanirwa kubvumira ALT zvinhu kuti zvigadziriswe. Anchor tag kurongedza kunofanirwa kubvumidza TITLE element yekugadzirisa. Zvinosuruvarisa kuti mangani maCMS masisitimu ane varombo zvemukati vapepeti!
Zvekutanga Dhirivhari Network: A content delivery network dandemutande remakomputa akawanikwa enzvimbo anochengeta zviwanikwa munzvimbo imomo… achibvumira mapeji kurodha zvakanyanya nekukurumidza. Zvakare, kana CDN yaitwa, yako peji zvikumbiro zvinogona kurodha zvinhu kubva kune yako webhu server UYE yako CDN panguva imwe chete. Izvi zvinoderedza mutoro pane yako webhu server uye zvinowedzera kumhanya kwemapeji ako zvakanyanya.
Yakakwira-Performance Kubata: Speed ​​ndiyo zvese kana zvasvika kune dzekutsvaga injini. Kana iwe uri kuyedza kuchengetedza mashoma madhora pakubata, uri kunyatsoparadza kugona kwako kuverengerwa uye kuverengerwa mushe pane injini dzekutsvaga.
Kuomesa Kwemifananidzo: Mifananidzo inowanzo tumirwa mumafaira makuru zvisina basa. Kubatanidza necompression compression chishandiso kudzikisa saizi refaira uye kudzora mifananidzo kuti uone zvakakwana kwakakosha.
Kubatanidzwa: Iko kugona kwekuwedzera mashandiro ezvako zvemukati nekutungamira chizvarwa, email kushambadzira, kushambadzira otomatiki, yemagariro midhiya kushambadzira, uye mamwe mapuratifomu ayo anokubatsira iwe kuwana nekuchengetedza traffic.
Simbe Kuisa Mifananidzo: Tsvaga injini dzinoda zvemukati mirefu ine yakawanda midhiya. Asi kurodha mifananidzo kunononoka saiti yako kukambaira. Usimbe kurodha inzira yekuisa mifananidzo apo peji racho rakatswanywa. Izvi zvinobvumidza iyo peji kurodha zvakanyanya nekukurumidza, ipapo chete kuratidza mifananidzo kana mushandisi asvika kwazviri.
Kutungamira Management: Mushure mekutarisira vawana chinyorwa chako, vanotaura sei newe? Kuva nemafomu vagadziri uye dhatabhesi yekutora inotungamira inofanirwa.
Meta Tsananguro: Injini dzekutsvaga dzinowanzo bata meta tsananguro yepeji uye kuratidza kuti pasi pemusoro uye chinongedzo mune yekutsvaga injini mhinduro peji. Kana pasina rondedzero yemeta iripo, injini dzekutsvaga dzinogona kutora zvinyorwa zvinyoronyoro kubva papeji… maitiro anozodzikisira mitengo yako yekudzvanya-pinda pazvinongedzo zvako pazvinjini zvekutsvaga uye zvinogona kutokanganisa kunongedzera peji rako. Yako CMS inofanira kukutendera iwe kugadzirisa meta tsananguro pane yega uye yega peji resaiti.
famba: Tsvagiridzo yekutsvaga iri kuputika mukushandisa sezvo mafoni uye mapiritsi anogamuchirwa mukati mese. Kana yako CMS isingatenderi inoteerera webhusaiti uchishandisa HTML5 uye CSS3 (yakanakisa sarudzo)… kana zvirinani kuendesa kune yakasarudzika-nharembozha template, iwe haugone kuverengerwa pakutsvaga nhare. Pamusoro pezvo, mafomati matsva enhare senge BSN unogona kuita kuti zvemukati zviratidzike zvakanaka pakutsvaga kunoitwa kubva kuGoogle zvishandiso.
Ping: Paunoburitsa zvemukati, iyo CMS inofanirwa kuendesa yako saiti kuGoogle neBing pasina kupindira. Izvi zvinotangisa kukambaira kubva kunjini yekutsvaga uye uwane yako nyowani (kana yakarongedzwa) zvemukati zvadzoswazve neinjini yekutsvaga. Injini dzeCMS dzakaomesesa dzinotomboisa Ping injini dzekutsvaga pakuronga zvemukati.
Redirects: Makambani anowanzo shandura nekugadzirisa nzvimbo dzawo. Dambudziko neizvi nderekuti injini yekutsvaga inogona kunge ichiri kunongedzera URL kune peji isipo. Yako CMS inofanira kukubvumidza iwe kutaurisa traffic kune peji idzva uye redirect iyo yekutsvaga injini ipapo futi saka ivo vawane uye vanongedze iyo nyowani peji.
Akapfuma Snippets: Injini dzekutsvaga dzinopa mafomati e microdata ekufungidzira uye kuzivikanwa kwechingwa mukati mewebsite yako. Kazhinji, iyi markup inoda kuiswa mukati medingindira rauri kuendesa neCMS yako kana unogona kuwana ma module anokubvumidza kuti ushandise zviri nyore. Zvipfumi zvakapfuma senge Schema yeGoogle uye OpenGraph yeFacebook inowedzera mitsva yekutsvaga uye kugovana uye inotyaira vashanyi vakawanda kudzvanya kuburikidza.
Robots.txt: Kana iwe ukaenda kumudzi (base kero) yedomain yako, wedzera Robots.txt kukero. Semuenzaniso: http://yourdomain.com/robots.txt Pane faira ipapo here? Faira ye robots.txt idhiyo faira yemvumo iyo inotaurira injini yekutsvaga / dandemutande / chinokambaira kuti ndeapi madhairekitori ekuregeredza uye ndeapi madhairekitori ekukambaira. Uye zvakare, iwe unogona kuwedzera chinongedzo kune yako sitemap mairi!
RSS Feeds: Kana iwe uine zvimwe zvivakwa uye uchida kushambadza yako blog, kuve neRSS feeds yekushambadzira zviri nyore zvinyorwa kana mazita kunzvimbo dzekunze chinodikanwa.
kutsvaka: Kukwanisa kutsvaga mukati uye kuratidza mhedzisiro inoenderana kwakakosha kune vashandisi kuti vawane ruzivo rwavari kutsvaga. Mapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga anowanzo kupa munda wechipiri kune vashandisi vekutsvaga kuti vatsvage mukati mesaiti zvakare!
Chengetedzo: Iyo yakasimba yekuchengetedza modhi uye yakachengeteka yekutambira inodzivirira yako saiti kubva pakurwiswa kana kuve neyakaipa kodhi yakaiswa pairi. Kana yako saiti ikawana kodhi yakaipa pairi, Google ichakunyora-uye kukuzivisa iwe maringe neWebmasters. Zvakakosha kuti iwe uve nerumwe rudzi rwekutarisa kana chengetedzo maficha akabatanidzwa muCMS yako kana pane yako yekutambira package mazuva ano.
Kudhinda Kwemagariro: Iko kugona kwekushambadzira zvirimo zvemukati nemazita akagadziridzwa nemifananidzo zvichaita kuti zvemukati zviratidzwe. Yakagovaniswa zvemukati zvinotungamira kune kutaurwa kweako zvemukati. Zvinotaurwa zvinotungamira kune zvinongedzo. Uye zvinongedzo zvinotungamira kune chinzvimbo. Facebook iri kuvhurawo Instant Zvinyorwa, fomati yekuburitsa zvakazara zvinyorwa zvakananga kumapeji emuchina wako.
Kubatana: Nepo vanhu vachiverenga zvinyorwa muRSS vaverengi zvakanyanya kudonha munzira munzira yekugovana munharaunda, kugona kubatanidza zvemukati zvako munzvimbo dzese uye maturusi kuchiri kwakakosha.
Tagging: Injini dzekutsvaga dzinonyanya kufuratira meta tag yemazwi, asi kumaka kunogona kuuya kunobatsira - kana pasina chimwezve chinhu chekuchengetedza mupfungwa mazwi akakosha auri kunongedza nepeji rega rega. Matagi anowanzo batsira kutsvaga uye kuratidza akakodzera machira uye yekutsvaga mhinduro mukati mewebsite yako.
Template Mhariri: Yakasimba template mupepeti inodzivirira chero kushandiswa kwematafura eHTML uye inobvumira Nice yakachena HTML uye yakanamatira CSS mafaera kunyatsomisa peji racho. Iwe unofanirwa kuwana nekuisa matemplate pasina kuita chero chakakosha kusimudzira kune yako saiti iwe uchichengetedza zvemukati zvako zvisina nyaya.
XML Sitemaps: Sitemap inogadzirwa zvine simba chinhu chakakosha chinopa injini dzekutsvaga ne mepu yezviri mukati mako zvirimo, zvakakosha sei, uye kuti zvakazopedzisira kuchinjwa riini. Kana iwe uine saiti hombe, ako mepu emepu anofanira kumanikidzwa. Kana mepu yesiti ikadarika 1Mb, yako CMS inofanirwa kuburitsa masamepu akawanda wobva waakochekera pamwechete kuti injini yekutsvaga igone kuverenga ese.
Ndichabuda negumbo pano ndotaura; kana agency yako ichikubhadharisa zvemukati zvekugadzirisa uye iwe usina mukana wecontent manejimendi sisitimu yekugadzirisa yako saiti… inguva yekusiya iro agency uye uzviwanire iwe nyowani ine yakasimba zvemukati manejimendi system. MaAgency dzimwe nguva anogadzira nzvimbo dzakaomarara uye dzinoda kuti iwe uchinje shanduko yemukati sezvaunoda ivo… hazvigamuchirwe.
Tags: ampcms seomicrodataruzha rwemashokoRobots.txtSearch Engine Optimizationseoiyo yekutarisaSITEMAPwordpress seoxml sitemap
Unoramba Uchishandisa Iro Izwi "Rakasika"…
Nov 13, 2010 na12:37 PM
Chii? Hapana kurudziro chaiyo? Ko kambani inoziva sei CMS yavanoda kana kuti yakasimba sei mhinduro inoshanda? Rondedzero yakanaka, VaKarr.
Mar 20, 2011 pa 4: 28 AM
Ida iyi rondedzero! Iyi ndiyo nhungamiro yangu sezvo ndave kutanga kutenga ndichitenderedza CMS. Ndanga ndichiita ese webhu dhizaini pachangu, asi ndinoda kudzikisira nguva yandinoshandisa kunyora kodhi kuti ndikwanise kuwedzera nguva yandinoshandisa pakuita hurongwa hwewebhusaiti. Iwe une chero kurudziro pane DIY mainstream masisitimu (WordPress, Joomla, nezvimwewo)?
Gumiguru 8, 2011 na6: 43 PM
Iyo URL inoshanda, muenzi. Nekudaro, yakanaka CMS icha ping / kuendesa saiti mepu yako nguva dzese paunoburitsa zvirimo!
Gumiguru 8, 2011 na6: 45 PM
Chinhu chega chandingawedzera kune ichi ikozvino ndechekuti bhurogi yepuratifomu inofanirwa kuratidza rel = "munyori" ma tag uye kubvumira kubatana kuGoogle Profile kuitira kuti mifananidzo yevanyori iratidze mumigumo yekutsvaga.
Gumiguru 8, 2011 na10: 38 PM
Kubvumirana zvachose - Hapana kambani inofanirwa kunge iri CMSless.